OpenWifi, tetikasa loharano misokatra hampiharana Wi-Fi miorina amin'ny FPGA sy SDR | Avy amin'ny Linux
Nandritra ny kaonferansa FOSDEM 2020 dia naseho izy io ny fampandrosoana loharano misokatra voalohany an'ny OpenWifi "Wi-Fi 802.11 a / g / n" Ny endrika onjampeo feno sy ny fiovan'ny toetr'andro izay voafaritra amin'ny alàlan'ny fandaharana (SDR, Software Defined Radio) ary FPGA.
Ny zavatra mahaliana momba ilay tetikasa openwifi dia izany mamela anao hamorona fampiharana Linux-mifanaraka tanteraka ary mifehy ny singa rehetra amin'ny fitaovana tsy misy tariby, ao anatin'izany ny sosona ambany ambany amin'ny adaptatera tsy misy tariby mahazatra napetraka amin'ny haavon'ny chips tsy azo idirana ho an'ny fanaraha-maso. Ny kaody ny singa rindrambaiko, ary koa ny boriborintany ary ny famaritana ireo bolan'ny fitaovana ao amin'ny Verilog ho an'ny fiteny FPGA, dia zaraina eo ambanin'ny lisansa AGPLv3.
openwifi mampiasa ny maritrano SoftMAC, izay manondro ny fampiharana ny stack 802.11 lehibe tsy mitambatra amin'ny lafiny mpanara-maso sy ny fisian'ny sosona MAC ambany amin'ny lafiny FPGA. Ny subsystem mac80211 nomen'ny kernel Linux dia ampiasaina ho toy ny stack tsy misy tariby, raha ny fifandraisana amin'ny SDR kosa dia atao amin'ny alàlan'ny mpandrindra manokana.
Ny singa enti-miasa ao amin'ilay prototype miasa hita mifototra amin'ny Xilinx Zynq FPGA sy AD9361 Universal Transceiver (RF).
Amin'ireo toetra mampiavaka azy avy amin'i OpenWifi
Fanohanana feno ho an'ny 802.11a / g ary fanohanana ampahany ho an'ny 802.11n MCS 0 ~ 7 (hatreto dia PHY rx ihany). Ny drafitra dia manohana ny 802.11ax
20MHz bandwidth ary 70 MHz hatramin'ny 6 GHz ny elanelam-potoana
Fomba fiasa: Ad-hoc (tambajotram-pitaovana mpanjifa), teboka fidirana, gara ary fanaraha-maso
Ny fampiharana FPGA ny protokol DCF (Distribution Coordination Function) mampiasa ny fomba CSMA / CA. Manome Fotoana fanodinana Frame (SIFS) amin'ny 10 ora
Ireo masontsivana laharam-pahamehana amin'ny fidirana amin'ny fantsona azo zahana: RTS / CTS, CTS ho azy, SIFS, DIFS, xIFS, fotoana slot, sns.
Amin'ny elanelam-potoana miorina amin'ny adiresy MAC
Fantsom-pifandraisana mora sy haingam-pandeha azo ovaina: 2MHz ho an'ny 802.11ah ary 10MHz ho an'ny 802.11p
OpenWifi amin'izao fotoana izao dia manohana ireo sehatra Xilinx ZC706 FPGA SDR miaraka amin'ireo transceivers Analog Devices FMCOMMS2 / 3/4, ary koa ADRV9361Z7035 SOM + ADRV1CRR-BOB sy ADRV9361Z7035 SOM + ADRVCR (FPGA + RF)
Ho an'ny fitantanan-draharaha, fitaovana linux mahazatra toy ny ifconfig sy iwconfig no azo ampiasainaary koa ny fampiasana sdrctl manam-pahaizana manokana izay miasa amin'ny alàlan'ny netlink ary mamela anao hitantana SDR amin'ny ambaratonga ambany (manodinkodina ny fisoratana anarana, manova ny fotoana fanamoriana fotoana, sns.).
Anisan'ireo tetikasa misokatra hafa manandrana ny Wi-Fi stack, azontsika atao ny manonona ny tetikasa Wime, izay mamolavola mpandefa IEEE 802.11 a / g / p mifototra amin'ny GNU Radio sy PC mahazatra.
Ary koa ny fametrahana rindrambaiko misokatra 802.11 misokatra dia novolavolain'i Ziria sy Sora (Microsoft Research Software Radio).
Mandritra ny fitsapana fampisehoana, avy amin'ny angona azo rehefa mampifandray mpanjifa amin'ny adaptatera TL-WDN4200 N900 USB mankany amin'ny fidirana fidirana miorina amin'ny OpenWifi, avela hahatratra 30.6Mbps (TCP) sy 38.8Mbps (UDP) rehefa mampita angona avy amin'ny fidirana mankany amin'ny client ary 17.0Mbps (TCP) ary 21.5Mbps (UDP) rehefa mandefa avy amin'ny client mankany amin'ny point access.
Ity misy demo iray amin'ny telefaona mifandray amin'ny teboka fidirana mihazakazaka OpenWifi.
Ireo singa tafiditra amin'izany ao amin'ny prototype voalohany an'ny OpenWifi manodidina ny 1300 euro ny vidiny, saingy afindra amin'ny takelaka mora vidy kokoa izy ireo. Ohatra, ny vidin'ny vahaolana miorina amin'ny Analog Devices ADRV9364-Z7020 dia 700 euro ary miorina amin'ny ZYNQ NH7020 izay mitentina 400 euro eo ho eo.
Ary farany, ho an'ireo liana hahafantatra bebe kokoa momba ilay tetikasa na hisintona ny sary voaomana amin'ny OpenWifi afaka mahazo izany amin'ny alàlan'ny fandehanana mankamin'ity rohy manaraka ity.
Eto ianao dia afaka mahita fampahalalana momba ny fampiasana sy ny fametrahana ny sary amin'ny karatra SD (ny sary dia miorina amin'ny kinova ARM an'ny Linux).
Amin'ireo singa manohana ny fonosana amin'izao fotoana izao dia misy: ADRV9364Z7020 SOM + ADRV1CRR-BOB, Xilinx zed + FMCOMMS2 / 3/4, Xilinx ZCU102 + FMCOMMS2 / 3/4, ary Xilinx ZCU102 + ADRV9371.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » OpenWifi, tetikasa loharano misokatra hampiharana wifi mifototra amin'ny FPGA sy SDR